i-osTicket: Uhlelo Oluhle Kakhulu Lomthombo Ovulekile | Kusuka kuLinux
Ngisebenze ezinkampanini ezimbalwa ezinkulu eVenezuela yangakithi, kuzo zombili, umnyango wezokuxhaswa ube nezinkinga eziningi uma kuziwa ekuphatheni izinkinga zobuchwepheshe zabasebenzisi, zaxazululwa ngokusetshenziswa kobuchwepheshe obuhlukahlukene, kodwa ngaphezu kwakho konke ngokuqala kwe- Uhlelo Lomthombo Wethikithi Ovulekile.
Yize ngingeyena uchwepheshe emkhakheni wokwesekwa, kwesinye isikhathi bekufanele ngibeke isandla esiningi kuleyo ndawo kwenye yezinkampani ezibalwe ngenhla, ngendlela efanayo, nganginethuba lokuba ngumsebenzisi we-GLPI futhi ngikhethe ukusebenzisa ithikithi, lowo kimi ungcono kakhulu Uhlelo Lomthombo Wethikithi Ovulekile.
Ukukhetha ukusebenzisa osThikithi Enkampanini esendaweni yokugcina iziqukathi, bekufanele ngihlaziye amathuluzi ahlukahlukene okugqame kuwo okulandelayo: I-RT (Cela i-Tracker), I-OTRS: Vula Uhlelo Lokucela Amathikithi, I-GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informático) y osThikithi.
Ngihlale nabokugcina, ikakhulukazi ngoba kungivumele ukuthi ngisebenzise ukushintshwa kwamathikithi ngokusho komnyango obhekene nokuxazulula lokho (Futhi ngale ndlela siphatha ukwesekwa kwazo zonke izindawo, hhayi kuphela indawo yezobuchwepheshe). Ngendlela efanayo, ngenza isiqiniseko sokuthi akukho ukuphinda kusebenze, ngoba ithikithi ngalinye belingathathwa kuphela ngumsebenzisi oyedwa.
Kubalulekile ukuqaphela lokho osThikithi Inokusebenza okudingekayo ukuphatha izisekelo zanoma yiluphi uhlobo. Ngaphezu kokuba ngumthombo ovulekile, inomphakathi omkhulu oyivumela ukuthi inikeze ngezici eziningi futhi ezingcono kunezimbangi zayo.
1 Luyini uhlelo lweThikithi Lomthombo Ovulekile?
2 Yini i-osTicket?
3 Izici ze-OsTicket
4 Ungayifaka kanjani i-osTicket
Luyini uhlelo lweThikithi Lomthombo Ovulekile?
I-Los Uhlelo Lomthombo Wethikithi Ovulekile noma yini ngeSpanishi yaziwa njenge Uhlelo Lomthombo Wethikithi Ovulekile, Yizicelo zamahhala ezisivumela ukuthi siphathe izehlakalo nezicelo zezinsizakalo ngendlela ehlelekile futhi ezenzakalelayo.
Izehlakalo nezicelo zamukelwa ngokususelwa kumathikithi athunyelwe abasebenzisi, agcinwa futhi athunyelwe ngezindlela ezahlukahlukene kumsebenzisi ophethe ukuphatha. Lawa mathuluzi asetshenziswa kabanzi kumaCall Centres, eMnyangweni we-IT, eDatha Center, ezinkampanini zeTelemarketing, phakathi kwabanye.
Kuyithuluzi lewebhu elivumela ukuphatha ngendlela esobala, elula nelula, izehlakalo ezidalwe ngabasebenzisi nge-imeyili, amafomu wewebhu nezingcingo.
ithikithi ekubhekwa abaningi kakhulu Uhlelo Lomthombo Wethikithi Ovulekile namuhla, njengoba inezici eziningi namathuluzi kunezinhlelo eziningi zamathikithi emakethe.
Ngendlela efanayo, ukufakwa kwe-osTicket kulula futhi ukusebenziseka kwayo kugqame ngaphezu kwezinye izixazululo. Ngaphezu kwalokho, ine-API enamandla evumela ukuhlanganisa ithuluzi nezixazululo ezivela eceleni.
Ukuphathwa kwemithetho yebhizinisi nge-SLA
Ikuvumela ukuthi uhlunge amathikithi ngokusho komnyango okuhambelana nawo ukuwuxazulula.
Kuyasiza ukusungula ukugeleza komsebenzi ngohlobo lwethikithi, ukwenza izimpendulo ezizenzakalelayo uma kunesidingo.
Ithuba lokufaka amafayela we-multimedia (izithombe, izithombe, umsindo namavidiyo) ezicelweni ezahlukahlukene.
Ungenza amanothi kumathikithi ngazo zonke izenzo ezithathwe esihlokweni okukhulunywa ngaso.
Thwebula amathikithi nge-imeyili, iwebhu, ucingo, ifeksi nange-API.
Izinkambu zangokwezifiso kumathikithi, avumela abasebenzisi ukuthi bacele imininingwane eqondile.
Umbhalo ocebile we-HTML
Ukufakwa kwezihloko zosizo ukuxazulula izehlakalo ngaphandle kokuvula ithikithi, kubuye kuvunyelwe ukwenziwa kwezigaba kumathikithi.
Vimbela abahlanganyeli abaningi bephendula ithikithi ngasikhathi sinye.
Dlulisa amathikithi phakathi kweminyango noma uwanikeze amalungu eqembu, ukuqinisekisa ukuthi aphathwa ngabasebenzi abafanele.
Zonke izicelo zifakwa online. Umsebenzisi angangena ngemvume esebenzisa i-imeyili kanye ne-ID yethikithi, noma kungekho bhaliso noma umsebenzisi odingekayo ukuletha ithikithi.
Imibiko ephelele ehlinzeka amazwibela ekusebenzeni nasekusebenzeni kwethimba lokusekela.
Ungayifaka kanjani i-osTicket
Izikhathi ezi-2 engizifakele i-osTicket ngilandele indlela esemthethweni esezinqolobaneni zayo, engizikhombisa ngezansi, hhayi ngaphandle kokubalula kuqala Izidingo nezinye izandiso ezinconyelwe ukuthi zifakwe.
Iseva ye-HTTP iyasebenza, mhlawumbe i-Apache
I-PHP version 5.4 noma ngaphezulu, kunconyiwe 5.6
isandiso se-mysqli se-PHP
Uhlobo lwe-MySQL database 5.0 noma ngaphezulu
gd, gettext, imap, json, mbstring, kanye ne-xml extension ye-PHP
Imodyuli ye-APC inikwe amandla futhi yahlelwa i-PHP
Indlela elula yokufaka i-osTicket ukuhlanganisa indawo yokugcina yomphakathi, bese wenza ifolda kuseva yethu yewebhu bese ekugcineni usebenzisa uhlelo lokusebenza. Njengoba kukhonjiswa kokulandelayo:
Ngemuva kwalokho ungafinyelela kwi-osticket oagina yeseva yakho ukufaka nokulungisa uhlelo lokusebenza, njengoba kudingeka. Ungathola futhi izibuyekezo ezintsha futhi uzisebenzise (kusuka kufolda lapho ubhale khona indawo yokugcina izinto), ngokwenza imiyalo elandelayo
Uhlelo lokusebenza luyatholakala futhi ukufakwa kuthuluzi elidumile Okuthambile.
Ngincoma kakhulu lolu hlelo lokusebenza futhi uma unesidingo sokuphatha izehlakalo ngendlela efanelekile, ngokuqinisekile leli thuluzi lizokusiza ngokushesha futhi kalula.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » osTicket: Uhlelo oluhle kakhulu lomthombo ovulekile
ILuis yasemadolobheni kusho
Ngabe ucabanga ukuthi kungenye indlela enhle futhi enezinzuzo ezifanayo nezinhlelo ezinjenge-Remedy AR?
Phendula uLuis wasemadolobheni
Kuyindlela enhle eya ku-BMC Remedy Help Desk, inezici eziningi ezinikezwa yi-Remedy AR ngalezo zinhloso ezithile, kodwa ngaphezu kwakho konke kumahhala.
I-athikili enhle kakhulu nezincomo ezinhle
Ngiyabonga kakhulu ngokuphawula kwakho
Sawubona isibankwa, indatshana enhle kanjani!
Nginombuzo; Ngusiphi isicelo i-osTicket engagcwalisa ukuphatha i-CMDB ngokuya ngesipiliyoni sakho?
Bengingenaso isidingo sokusebenzisa i-CMDB, esimweni sami esithile uma kungenzeka ngiyidinge ngingahle ngithathe ithrekhi esheshayo ngisebenzise i-OTRS https://www.otrs.com/ esivele ifaka i-CMDB ngokuzenzakalela ... Manje, uma ngiyihlanganisa ne-osticket, ngisebenzisa i-api yayo enamandla ukuhlanganisa ne-Itop, eyi-CMDB evulekile futhi enamandla, i-Itop angiyazi ngokuphelele (test pair pair ), kepha abanye engisebenza nabo bayisebenzisile ekukhiqizeni futhi bakhulume ngokumangalisayo ngakho.
Njengamanje ngisebenza ne-Itop ngiyincoma ngokungaboni ngoba iphelele ngokuphelele futhi inamandla amakhulu kangangokuba ngenxa yezinkinga zansuku zonke, asilisebenzisanga ngokugcwele ithuluzi kepha ngokuqinisekile likunikeza inani elikhulu lezinketho Isikhathi sokuqalisa i-CMDB enamandla.
UDavid gruzzi kusho
Mngani futhi nginombuzo, ingabe unayo imanuwali noma i-videotutorial noma okuthile engingakusebenzisa ukumisa kusuka ku-0 kuye ku-100 ku-itop
Phendula uDavid Gruzzi
i-osticket idinga ukuguqulwa kwamakhodi ambalwa kepha iyabadinga ukuthi basebenzise i-CMDB, kepha-ke kubhekwe ukuthi amazwe aseLatin awalandeli kahle amazinga ngamasu athile owasebenzisayo futhi kuzoba ngcono kakhulu kune-OTRS .. noma yini engibona ukuthi kuzofanele ngisebenzise impahla enhle kwalokhu ngoZibandlela 2020 .. njengoba kunezindatshana eziningi ezingacacanga njengalezi lapho bethi nje kuhle ukuthi kulula kodwa akukho ukwenziwa ipharamitha .. ukuthi ngaphandle kwalokhu akuyona into enhle njengoba injalo
Yebo, umbuzo, kukhona i-plugin noma ikhodi okufanele isetshenziswe, ukuze kuthi lapho kunikezwa ithikithi kwilungu eli-1 lokusekela, ithumele i-imeyili ngokuzenzakalela kumuntu okhiqize ithikithi, ngenombolo yethikithi negama lomuntu ozoya kuyo . Jabulela ..
Isibuyekezo esihle, yebo mnumzane, ngiyabonga ngesincomo sakho.
I-athikili enhle, noma yisiphi isincomo sokushintsha amathikithi usebenzisa amafayela we-CSV?
Alejandra Gonzalez kusho
Ulale kahle! Ngisithola kanjani isaziso ngeposi kuphela emnyangweni ophethe ukuxazulula ithikithi hhayi kubo bonke abenzeli
Phendula u-Alejandra González
UDiego Villasis kusho
I-athikili nezincomo ezinhle, ungancoma i-OSTicket ngezimangalo ezingaveli ku-IT, kodwa ezivela ebhizinisini, njengezimangalo zekhwalithi yomkhiqizo, izimangalo ze-invoyisi, njll.
Ingabe isikrini sezimangalo singenziwa ngezifiso nezinkambu zaso?
Ngabe unayo i-App yokusebenza kusuka kuma-smartphones e-Android / IOS?
Sicela uthethelele izinto eziningana ngasikhathi sinye, ngiyethemba ukuthola imibono yakho efanele
Phendula u-Diego Villasis
I-GLPI iphelele impela, ikuvumela ukuthi uthumele ama-imeyili, futhi uxhumeke yi-LDAP
I-Osticket iyisinqumo esihle kakhulu sokwesekwa kwamakhasimende, ngiyisebenzise isikhathi eside enkampanini engangisebenza kuyo. Kungakho nginayo ngaphakathi kohlu lwezinhlelo zamathikithi omthombo ovulekile ezisetshenziswa kakhulu. https://helpdeskpymes.com/herramientas-de-ticketing/
UJuan Carlos Herrera Blandon kusho
Mngani unjani, khona-ke kulolu hlelo ungakha futhi uhlelo lokusungula ??? Ngabe i-GLPI ikwenza kanjani ???
Phendula uJuan Carlos Herrera Blandon
UNohel Guardiola kusho
Ntambama enhle, Okuqukethwe okuhle kakhulu, nginombuzo owodwa kuphela maqondana nesistimu yokusebenza oyincomayo ukufaka i-OSticket
Phendula uNohel Guardiola
U-Alejandro Diaz kusho
sawubona, ngabe kukhona uchwepheshe we-osTicket lapha noma othile omncomayo?
Phendula ku-alejandro diaz
ENGLER umxhumanisi kusho
U-Olá Prezado, ngiyinkampani ebonisanayo i-Engler, ngisebenza ngokuthengiswa kwamafulethi agcwele, sineBARUERI, OSASCO, CARAPICUIBA, GUARULHOS NE-SÃO BERNARDO DO CAMPO, amanani entengo kanye nemibandela (Kusuka ku-209,00) i-Aceita FGTS, i-Venha conhecer o kuhlotshisiwe (amakamelo okulala ayi-01 no-02) phakathi kokuxhumana no-zap 11 98495-1050, ukwazi imininingwane nokuvakashelwa noma ukuhlobisa, (Engler Consultant)
Phendula ku-ENGLER CONSULTANT